Nadaafada shaqsiyeed: caadooyinka ilaaliya caafimaadkaaga iyo sawirkaaga | Ragga Stylish
Nadaafadda shaqsiyeed waa inay ka mid noqotaa mudnaanta koowaad ee nin kasta. Abuuritaanka nidaam nadaafadeed oo adag oo ku dhagan ayaa fure u ah sawirkaaga iyo qaabkaaga. Waxaa sidoo kale lala xiriiriyay kororka isku kalsoonida.
Waa in maskaxda lagu hayaa taas cawaaqibka nadaafad darrada shaqsiyeed waxay dhaafsiisan tahay ur xun ama aragti fudud oo aan fiicnayn, kaasoo sababi kara dhibaatooyin caafimaad oo dhab ah.
1 Caadooyinka nadaafadda qofka
1.2 Dhaq timaha iyo gadhka
1.3 Alaabooyinka si aad gadhkaaga u ahaato mid nadiif ah oo hagaagsan
1.4 Dhaq gacmaha
1.5 Nadiifi oo jar ciddiyaha
1.6 Sidee loo ilaaliyaa ciddiyaha
1.7 Caday ilkahaaga
Caadooyinka nadaafadda qofka
Nadaafadda shaqsiyadeed waxay ka kooban tahay sameynta wax kasta oo lagama maarmaan u ah nadiifinta jirka iyo ka ilaalinta dhammaan jeermiska noocyadiisa kala duwan. Haddii aad qubeysatid maalin kasta, ilkahaaga nadiifi oo gacmahaaga dhaq marwalba, waxaad leedahay nadaafad shaqsiyeed oo wanaagsan.
Aynu u daadagno caadooyinka nadaafadda aasaasiga ah, sharaxaya ujeedadooda iyo bixinta talooyin kaa caawin kara inaad horumariso:
Qubeysku badanaa waa tallaabada ugu horreysa ee nadaafadda shaqsiyeed ee maalinta. Codsiga saabuun iyo biyo jirka oo dhan waa daaweynta ugufiican wasakhda, maqaarka dhintay iyo dhididka. Sidoo kale waa hab fiican oo lagu bilaabo maalinta, laakiin waqtigu wuxuu kuxiran yahay doorbid shaqsiyeed.
Qubeyska maalin kasta sidoo kale waxay ka caawisaa ka hortagga dhibaatooyinka sida 'cagaha cayaaraha'. Si fiican u qalajinta cagahaaga oo aad laba meelood oo isqurxin ah ugu rido boorsadaada jimicsiga ayaa ah taxaddarro kale oo mudan in lagu xisaabtamo.
Dhaq timaha iyo gadhka
In kasta oo ay tahay in jidhka la maydho maalin kasta, timuhu badanaa way ku filan yihiin dhawr jeer toddobaadkii. Haddii aad gadh leedahay, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad dhaqdo xilliyo iyadoo la isticmaalayo a shaambo gadhka. Qof kastaa wuxuu leeyahay nooc timo ah, sidaa darteed Adiga ayay kuu taalaa inaad go aansato inta jeer ee aad maydho timahaaga iyo gadhkaaga si ay marwalba nadiif u ahaadaan.
Maydhinta gadhkaaga, waa inaad hubisaa in qalabka kala duwan ee aad u xiirto uguna xoqdo timaha wajiga sidoo kale aad u nadiif yihiin.
Alaabooyinka si aad gadhkaaga u ahaato mid nadiif ah oo hagaagsan
Fiiri maqaalka: Waxyaabaha gadhka. Halkaas waxaad ka heli doontaa alaabooyinka lagama maarmaanka u ah si aad u hesho nooca ugu fiican ee gadhkaaga (laga bilaabo shaambo ilaa hagaajiye, iyada oo loo marinayo gadhka iyo maqaska shaarbaha) iyo sida saxda ah ee loo isticmaalo.
Waa lama huraan inaad ku dhaqdo gacmahaaga saabuun iyo biyo had iyo jeer hadba sida loogu baahdo si jeermiga looga ilaaliyo. Marka la eego cuntada, waa inaad hubisaa inaad marwalba aad u nadiif tahay. Sidaa awgeed, waa inaad gacmaha iska dhaqdaa ka hor intaadan wax cunin ama aadan gacanta ku hayn cuntada.
Ku qabashada cuntada gacmaha nadiifka ah waa muhiim, laakiin ma aha waxa kaliya. Waxaa jira boqolaal xaaladood oo kale oo nolol maalmeedkaaga ah oo kaa doonaya inaad dhaqso u dhaqdo gacmahaaga, sida markaad qashinka ama lacagta ka dib taabato.
Ka waran haddii musqusha aysan u dhawayn? Marka aysan jirin hab aad gacmahaaga ugu dhaqi kartid qaab dhaqameed, waxaad u jeesan kartaa beddelaadyo sida jellada gacmaha oo lidka ku ah. Markasta oo aad sidato mid ka mid ah alaabtan waa fikrad aad u fiican nadaafaddaada shaqsiyeed.
Nadiifi oo jar ciddiyaha
Wasakh ama ciddiyaha dhaadheer ma aha oo kaliya inay sameeyaan masiibada ugu horreysa ee masiibada, waxay sidoo kale urursadaan jeermis u gudbi kara qaybaha kale ee jidhka. Adoo gacan ka helaya masar goynta, jar cidiyaha iyo cidiyaha. Had iyo jeer ka dhig kuwo gaagaaban.
Haddii ay wasakh leedahay ciddiyaha, ku isticmaal burushka musbaarka tubbada hoosteeda ilaa aan raad laga helin. Samee ficilladan sida ugu badan ee lagama maarmaanka u ah si had iyo jeer looga dhigo wax gaagaaban oo nadiif ah. Iska ilaali inaad qaniinto iyaga oo kugu kacaya wax kasta oo kharash ah.
Sidee loo ilaaliyaa ciddiyaha
Fiiri maqaalka: Sida loo xareeyo ciddiyaha. Halkaas waxaad ka heli doontaa sida saxda ah ee loo jaro loona xareeyo ciddiyahaaga, iyo sidoo kale in la jaro meelaha la jaro iyadoo aan waxyeello soo gaarin.
Waan ognahay nadaafadda afka inay muhiimad weyn uleedahay muuqaalka qofka. Ilkaha wax badan ayey ka sheegaan qofka, markaa hubi inaad leedahay dhoola caddeyn nadiif ah oo cad. Oo waxaa jira hal dariiqo oo tan lagu sameeyo: burushka iyo dunta. Waxaa sidoo kale lagula talinayaa inaad u tagto dhakhtarka ilkaha sanadkiiba hal mar.
Laakiin cadayashada ugu yaraan laba jeer maalintii (midkood waa qasab ka hor intaadan seexan oo uusan gaarin laba daqiiqo markasta) ayaa ka sarreeya dhammaan su'aasha caafimaadka. Sida dhammaan caadooyinka nadaafadda shaqsiyeed, kan kaa caawin doona inaad ka hortagto cudurada, gaar ahaan suuska ilkaha iyo cirridka, taasoo u horseedi karta ilko beel iyo cawaaqib xumo kale oo aan fiicnayn (qaarkood ayaaba layaab leh oo qatar ku ah caafimaadka).
Inta lagu guda jiro cadayashada waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in lagu dhaafo buraashka labada ilkood ee ilkaha iyo gudahaba. Y kaliya ha cadayan ilkahaaga: cadaya carrabkaaga si aad u dhamaysid ka qaadista dhamaan bakteeriyada. Ugu dambeyntii, hubi inaad calaamadeyso buraash cusub (mid ka mid ah qalabka nadaafadda shaqsiyeed ee muhiimka ah) saddexdii biloodba mar ama wixii la mid ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Nadaafadda qofka